Talọ oriri na ọ Dinụ Dinụ Dinnerware N'ogbe | 28 Seramiiki
Rie nri na asatọ asatọ, iri nri na ụwa
Ezi China Dinnerwar
Ihe omuma nile bu echiche di iche, uwa di iche iche na efere ndi aputaputara na usoro mmeputa ihe ohuru.
Nri bụ otu n'ime ahụmịhe kachasị nke na-ewetara ndị isi na ndị mmadụ ọnụ. Anyị na-atụgharị anya ịhụ na efere na efere ntụpọ site na nchịkọta agba agba abụọ a na-egosipụta mmụọ ọkụ a ma dabaanitory.
NT TEKWU AKW21KWỌ AKW DesignKWỌ - 2021 Ọdịdị Ọdịdị Ọdịdị Ọhụrụ nke Ọdịdị Nri Anyasị Ntọala Designdị Uche Pụrụ Iche Maka Reslọ oriri na ọ Resụtaụ
A pụrụ iji tebụl pụrụ iche nwere agba uhie na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, nke nwere matte na nke na-egbu maramara, nwere atụmatụ dị iche iche chọọ tebụl nri n'ụlọ nri gị nke ọma. Na-emeju echiche dị iche iche nke ndị chefs.
COPPER BLUE - Morden Style Gradient Gre en Glossy Poselin talọ oriri na ọ Dinụ Dinụ Dinnerware Setịpụrụ N'ogbe na Omenala
Ihe na-egbuke egbuke na-egbuke egbuke bụ nchịkọta a na-enwu gbaa. Site na ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ ọhụrụ a, ụdị dị iche iche na nha dịgasị iche maka nhọrọ gị.
LOTUS BLUE - 2021 New Product Blue Poselin Tableware, Glazed Restaurant Dinnerware Ceramic Na Omenala
Otu n'ime ihe ọhụụ na ihe pụrụ iche na-acha anụnụ anụnụ na-acha anụnụ anụnụ, ọ bụghị naanị na agba anụnụ anụnụ, kamakwa ọ na-agwakọta oke osimiri na-acha anụnụ anụnụ. Site n ’ihu onyonyo, mee ka nri gị dị ụtọ ma dịkwa mma ile anya.
GREEN JUNGLE - Populardị Rustic Style Green Enamel Ceramic Dinnerware set, Grade AB Poselin Setịpụrụ Maka Reslọ oriri na ọurantụurantụ
New green restaurant efere N'ogbe. Dinnerdị nri abalị dị iche iche buru ibu na ụdịdị dị iche iche, dị maka ụlọ oriri na ọ marketụ marketụ South-East Asia ahịa. Ha na-adịgide adịgide ma dịkwa nchebe maka ngwa ndakwa nri na ngwa ndakwa nri.
Ọ bụrụ na ịchọrọ nhazi ọ bụla maka echiche gị, mee ka ọrụ ndị ọkachamara na-eme ka echiche a mezuo echiche a.
1. Ajuju: na-enye foto ma ọ bụ sere foto banyere echiche ya na nkọwapụta nke usoro decial, akụkụ, ihe na achọrọ.
2. Chepụta: Ndị otu imewe ahụ na-achọpụta onyonyo 3D maka nkwenye gị gbasara imewe ahụ, wee rụọ ọrụ na nlele. Ndị otu ahụ gụnyere site na mmalite nke ọrụ iji hụ na ngwaahịa kachasị mma ejikọtara maka mkpa ndị ahịa.
4. Njikwa mma dị mma: Iji nye ndị na-ewe ihe owuwu dị elu, anyị bụ ikike& Siste mma usoro nke ọma.
Ebumnuche anyị bụ imeju afọ ojuju nke nwere ogo dị elu ma nwee ezi uche dị na ya iji hụ na onye ahịa ọ bụla nwere ike iru ala ma nwee ntụkwasị obi na ngwaahịa anyị na tebụl anyị. Ngwaahịa ceramics abụọ na-achọta ngwa ha site n'ahịa ahụ n'ihi ọmarịcha ọrụ.
White Tableware gbasara mkpokọta izute requirment maka onye ọ bụla akụkụ nke Hotel, dị ka n'ọnụ ụlọ ogologo, nkuru n'onwe, Special ụlọ oriri na ọ ,ụ ,ụ, Main Dinning, Bar ...Kpọtụrụ maka nkọwa ndị ọzọ
AKWKWỌ AKW WKWỌ mgbazinye
Efere chaja na ọla edo na-acha ọlaọcha, ọla ọcha nwere ike izute ajụjụ nke ndị ahịa mgbazinye nke chọrọ ihe ngosi tableware a na-eme na mmemme ahụ.
UTlọ oriri na ọ SOLụESụ Ngwọta
Agba Mbadamba mkpokọta na-ezute echiche dị iche iche nke ụlọ oriri na ọ restaurantụ ,ụ, AKWOLKWỌ ​​ọkụ, Mkpokọta URBAN, FOGS COLLECTION ...Pịa maka ụlọ oriri na ọ restaurantụ moreụ ndị ọzọ maka ịlele gị
Super ahịa DINNERWARE DET
Hosen Abụọ asatọ nke Ceramics nyere efere nri abalị na ngwugwu setịpụrụ, ọkachasị maka PC 18 kwa otu, 24pcs kwa set. Kpọ ya na ngwungwu echekwara ma hụ na ngwongwo a na-ebu n'oge ebu ma ọ bụ ire ịntanetị.
A na-amị mkpụrụ abụọ dị ka onye na-eme tebụl eziokwu 1998
Na mpaghara 30,000 square Metas, a na-enye ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ezigbo ọrụ, ndị ọrụ ọkachamara, ikike nrụpụta dị elu, nlekọta ọgbaghara dị elu. Site na nchikota nke omenala na teknụzụ dị ugbu a, ceramics abụọ na-agbaso amụma nke imepụta ngwaahịa ndị ọhụrụ na ịgbaso ụdị nka; Anyị na-enye ngwaahịa ndị a na-eweta ihe iji mezuo ihe ndị ahịa dị iche iche.
Naanị gwa anyị ihe ị chọrọ, anyị nwere ike ime karịa ị nwere ike ịlele.
Kpọtụrụ Ahịa na Jane Lee